तपाईँको स्लाईडमा यदि तपाईँ फाँट सम्पादन गर्न चाहनुहुन्छ भने, चयन गरेर रोज्नुहोस् सम्पादन – फाँटहरू.
घुसाउनुहोस् - फाँटहरू
स्थिर फाँटको रूपमा हालको मिति तपाईँको स्लाईडमा घुसाउनुहोस् । मिति स्वचालित अद्यावधिक हुँदैन
चल फाँटको रूपमा तपाईँको स्लाईडमा हालको मिति घुसाउनुहोस् । मिति स्वत: अद्यावधिक हुन्छ जब तपाईँ फाइल फेरि लोड गर्नुहुन्छ
स्थिर फाँटको रूपमा तपाईँको स्लाईडमा हालको समय घुसाउनुहोस् । समय स्वत: अद्यावधिक हुँदैन
चल फाँटको रूपमा तपाईँको स्लाईडमा हालको समय घुसाउनुहोस् । समय स्वत: अद्यावधिक हुन्छ जब तपाईँ फाइल फेरि लोड गर्नुहुन्छ
सूची गरिएको LibreOffice प्रयोगकर्ता डेटा सक्रिय स्लाईडमा पहिलो र अन्तिम नामरहु घुसाउनुहोस्.
सक्रिय फाइलको नाम घुसाउनुहोस्. नाम तपाईँले फाइल बचत गरेपछि मात्र देखिन्छ.